Hesorinao ve ny charger an'ny telefaona rehefa avy nandoa vola?
Ny famahana finday isak'alina dia fombafomba tena ilaina alohan'ny hatory ho an'ny ankamaroan'ny olona. Saingy ilaina ve ny mamoaka ny charger aorian'ny famerenam-bola? Eny ny valiny. Raha ajanona plastika ny charger nefa tsy mamaly tele loatra ny telefaona. Ho lasa atahorana afo izany. Rehefa miakatra ny fiampangana ...
NEWVEW—— Fomba fijery vaovao ho an'ny tanora
Andro vitsivitsy izay dia misy fivarotana vaovao misokatra ao an-tanànan'i Yi Wu izay nahasarika tanora vahiny maro ho tonga hiantsena. Raha ny voalazan'ny vahiny dia tonga izy ireo hividy headphone avo lenta, écouteur ary kojakoja elektronika hafa. Na izany aza, tsy ny kalitao ihany no tadiavin'izy ireo, ...
Ahoana ny fomba hisafidianana banky herinaratra mety
Misy teboka maro samihafa tokony hodinihina rehefa mividy banky herinaratra. Ireto manaraka ireto no hevi-dehibe nofidianay. 1.Ny fahaiza-manao: Ny iray amin'ireo teboka manan-danja indrindra tokony hodinihina rehefa mividy banky herinaratra dia ny fahaiza-manao takiana. Fitaovana inona no homena vola, inona no pu ...
Headset maimaim-poana amin'ny tanana, Headset Miaraka amin'i Mic, Earphones tsy misy tariby, Apple Car Charger, Headphones Bluetooth Miaraka amin'i Mic, Cable Charger an'ny telefaona,